Utu Pi Pico: Nkọwa na Atụmatụ | Akụrụngwa n'efu
Mkpụrụ Pi Pico: Nkọwa na Akụkụ
Utu Pi Pico bụ bọọdụ microcontroller ọhụrụ nke Raspberry Pi Foundation haziri. Ngwaahịa ọhụrụ nke sonye na ndi diri na nke bụ ihe yiri Arduino karịa SBC. Na mgbakwunye, ọ nwere nnukwu ihe ịtụnanya ọzọ nke juru onye ọ bụla anya, ọ gafere obere obere ya, arụmọrụ ike ya dị ebube, ma ọ bụ ọnụ ahịa ya naanị $ 4.
Ma ọ bụ na Raspberry Pi Foundation agbanweela, ma ọ dịkarịa ala nwa oge, n'ime ihe na-enweghị isi, na-emepụta mgbawa nke ya. Ọ gbasara Mgbanwe nke ọnụahịa RP2040. Nke ahụ bụ, maka oge a, ha ejighị ibe Broadcom dị ka bọọdụ ndị ọzọ, mana ha mere ya n'onwe ha. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ n'ọdịnihu ha ga-agbaso otu ụdị a na efere ndị ọzọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ naanị ihe akọwapụtara ...
1 Mgbanwe nke ọnụahịa RP2040
2 Banyere mbadamba Pi Pi Pico
2.1 Otu esi amalite mmemme
Mgbanwe nke ọnụahịa RP2040
El RP2040 bụ mgbawa izizi nke Raspberry Pi Foundation haziri. Ihe e kere eke n'ụlọ iji welie bọọdụ a dị obere ma dị obere ma mezie maka ọrụ ebe nha na oriri dị mkpa, dị ka ụfọdụ ngwa agbakwunyere ma ọ bụ ngwa agbakwunyere na robotics, ụlọ ọrụ, akụrụngwa, ngwa ahụike, ọdụ ụgbọ elu, wdg.
N'agbanyeghị ihe mgbasa ozi ndị ọzọ na-ekwu (ọbụlagodi ụfọdụ ndị dị mkpa na ndị a ma ama), ọ bụghị mgbawa nke ha rụpụtara, ọ bụ naanị ha mere ya. Otu SoC nke ndị otu anyị haziri nke ọma ASIC nke ahụ arụpụtakwala IC a.
Nke ahụ bụ, ha agbanwebeghị ka ha bụrụ IDM, kama ọ bụ naanị akụkọ ifo zigara atụmatụ ha ka e mepụta ya. TSMC. N'ime ụlọ ọrụ ndị a ejirila usoro 40nm maka imepụta ha. Ee ee, ọ bụ ọnụ nwere ike iyi ihe ochie, mana teknụzụ lithography karịrị nke a maka ọrụ a ma rụọ ọrụ ya nke ọma.
N'ịlaghachi n'usoro nke rp2040 SoC nke na-enye ike a Raspberry Pi Pico, ọ bụ mgbawa nke a na-emebeghị isi ya site na ncha, kama ha ahọrọla iji ogwe aka IP. Kpọmkwem, o jiri ya abụọ ARM Cortex M0 + arụ ọrụ na 133Mhz. Na mgbakwunye, ejirila ya na 264 KB nke RAM, yana 2MB nke ọkụ.
Ha niile agbasaghị iji rụọ ọrụ sistemụ dị ka Linux (ma ọ bụ ndị ọzọ), dị ka ọ na-eme na bọọdụ SBC ndị ọzọ, mana Raspberry Pi Pico nwere ike naanị ịse ma ọ bụ mmemme edepụtara n'asụsụ dị ka C / C ++ ma ọ bụ MycroPython. Ozugbo ị dere ha na PC gị, enwere ike ịfefe ya na bọọdụ site na microUSB nke mere na MCU unit, ma ọ bụ microcontroller, na-eme ha.
N'ikpeazụ, agaghị m achọ ịhapụ ya na nomenclature eji, ya bu na aha RP2040 nwere ihe kpatara ya:
RP: pụtara Rasberi Pi
2: ọnụ ọgụgụ cores.
0: isi ụdị (M0 +).
0: log2 (nke anaghị agbanwe agbanwe ma ọ bụ ọkụ / 16kB), ọ bụrụ na ọ bụ 0 ọ bụ maka na ọ nọ n’elu.
Nke a nwere ike iyi nzuzu, ọkachasị tụlee na ugbu a naanị otu SoC ka ha mepụtara. Mana o nwere ike ịpụta na Raspberry Pi Foundation nwere ike chepụta ihe ndị ọzọ n'ọdịnihu...
Ozi ndị ọzọ - Mpempe akwụkwọ RP2040
Banyere mbadamba Pi Pi Pico
Efere ọhụrụ ahụ Utu Pi Pico ọ na-edobe ihe ịtụnanya dị ụtọ, n'agbanyeghị obere ọ dị. Ma naanị maka ọnụahịa nke $ 4, nke mere ka ọ bụrụ otu n'ime bọọdụ microcontroller kachasị ọnụ ahịa na ahịa.
Ma njirimara teknụzụ na nkọwa, lee nkọwa nile nke efere:
SoC: RP2040 haziri na UK site n'aka otu ASIC na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke Raspberry Pi Foundation.
DualCore ARM Cortex-M0 + na elekere elekere dị egwu ruo 133Mhz.
264 kB nke nchekwa SRAM
2MB nke on-osisi flash ebe nchekwa.
Na oriri dị oke ala na ụra na-ehi ụra.
Njikọ: microUSB na nkwado maka USB 1.1 ọbịa
Mmemme: Dọrọ & dobe iji asụsụ dị ka C / C ++ na MicroPython.
GPIO: 26-pin multifunction
Ndị ọzọ atụdo: 2x SPI, 2x I2C, 2x UART, 3x 12-bit ADC, ọwa 16x PWM.
ọzọ: ihe mmetụta okpomọkụ, ụlọ akwụkwọ na-ese n'elu mmiri na ROM, na 8x PIO (Ihe omume I / O) iji nwee ike ịmegharị bọọdụ ahụ iji kwado akụkụ ndị ọzọ, wdg. Dịka ọmụmaatụ, iji PIO enwere ike ịhazi ya iji emomie VGA, ụda, onye na-agụ kaadi SD, wdg.
Ahịa: 4 $ (zụta)
Otu esi amalite mmemme
Ihe ohuru nke Pi Pico emeputara site na iji C / C ++ SDK ma obu ọdụ ụgbọ mmiri MicroPython, dabere na ịchọrọ iji otu asụsụ ma ọ bụ ọzọ maka ọrụ gị. Na mgbakwunye, mmemme a na-adị mfe:
Naanị site na ijide bọtịnụ BOOTSEL na bọọdụ
Ijikọ microUSB USB na PC (Linux, Windows, ma ọ bụ macOS, ị nwedịrị ike mmemme site na Raspberry Pi 4)
Mgbe ahụ a na - ewepụta bọtịnụ BOOTSEL ma PC ga - agbago ngalaba ọhụrụ akpọrọ RPI-RP2 dị ka a ga - asị na ọ bụ pendrive.
Ugbu a, ị ga-adọkpụrụ faịlụ UF2 koodu na ebe nchekwa ahụ ma ọ ga-ebu.
The Pi Pi Pi ga-amaliteghachi ma malite ịme ihe omume ahụ.
Na mgbakwunye, ị nwekwara a faịlụ INDEX.HTM n'ime unit ahụ ga-egosi gị akwụkwọ gọọmentị na weebụsaịtị Raspberry Pi. Ihe faịlụ INFO_U2F.TXT ọzọ nwere ozi gbasara bọọdụ ahụ, dịka ụdị bootloader.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Mkpụrụ Pi Pico: Nkọwa na Akụkụ
Igwe arụmọrụ - gịnị bụ ihe ahụ?
ATECC608: usoro nchekwa maka Raspberry Pi